Resilience: This Moment and Beyond (Burmese) ဖိစီးမှုဒဏ်ခံနိုင်စွမ်း - လက်ရှိအခိုက်အတန့်နှင့် ထိုမှကျော်လွန်၍ | Hollaback! Together We Have the Power to End Harassment
Resilience: This Moment and Beyond (Burmese) ဖိစီးမှုဒဏ်ခံနိုင်စွမ်း – လက်ရှိအခိုက်အတန့်နှင့် ထိုမှကျော်လွန်၍
“ဖိစီးမှုဒဏ်ခံနိုင်စွမ်း” ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။ မိမိကိုယ်ကိုယ် တည်ငြိမ်အောင်ထိန်းချုပ်ရာတွင် မည်သည့်အရာက အထောက်အကူပြုပြီး မည်သည်က အထောက်အကူမပြုသနည်း။ စိတ်ဖိစီးမှု သို့မဟုတ် မသက်မသာဖြစ်မှုကို ခံစားရသည့် အခြေအနေတစ်ရပ်ကို ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် မည်သို့ အကဲဖြတ်သုံးသပ်ပြီး လျင်မြန်စွာ ရုန်းထွက်နိုင်သနည်း။
ဤလေ့ကျင့်သင်ကြားရေး ရင်းမြစ်သည် ဖိစီးမှုဒဏ်ခံနိုင်စွမ်းအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ တစ်နာရီကြာ လေ့ကျင့်သင်ကြားမှုကို ဖြည့်စွက်ပံ့ပိုးပေးရန် ရေးဆွဲထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ Hollaback! သည် မိမိကိုယ်ကိုယ် ထိန်းသိမ်းနည်း၊ စောင့်ကြည့်သုံးသပ်နည်းနှင့် စိတ်ဖိစီးမှုနှင့် စိတ်ဒဏ်ရာတို့အပေါ် ကျွန်ုပ်တို့၏ တုံ့ပြန်ပုံနှင့် ပတ်သက်၍ လှုပ်ရှားတက်ကြွစွာ ရွေးချယ်မှုများ ပြုလုပ်နည်းတို့အတွက် အသိပညာပေးရန် ရည်ရွယ်ထားပါသည်။ ထုံးစံအတိုင်း သင့်အနေဖြင့် ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန် ရွေးချယ်ပါက မိမိကိုယ်ကိုယ် ဂရုစိုက်ပါ။ ဤနောက်ပိုင်းတွင်လာမည့် အကြောင်းအရာများသည် အချို့သောသူများအတွက် စိတ်ထိခိုက်ဖွယ် ဖြစ်စေနိုင်သည်။
ပင်ကိုယ်အဓိပ္ပာယ်အတိုင်း ပို၍ပြောရလျှင် ဖိစီးမှုဒဏ်ခံနိုင်စွမ်း ဆိုသည်မှာ အရာဝတ္ထုတစ်ခု၏ မူလပုံသဏ္ဍာန်အတိုင်း ပြန်ဖြစ်နိုင်စွမ်းအဖြစ် ဖွင့်ဆိုကြသော်လည်း အဆိုပါ သိပ္ပံအယူအဆ တစ်ခုတည်းကိုပင် မမျှတမှုနှင့် ထိခိုက်နာကျင်မှုများဖြင့် ပြည့်နှက်နေသော ကမ္ဘာလောကအတွင်း ကျွန်ုပ်တို့၏ ဘဝနေထိုင်မှုတွင် ကျင့်သုံးနိုင်သည်။ ဖိစီးမှုဒဏ်ခံနိုင်စွမ်းကို တည်ဆောက်နိုင်သည့် အပိုင်းကဏ္ဍများ အများအပြားရှိပါသည် – တစ်ကိုယ်ရည် ဖိစီးမှုဒဏ်ခံနိုင်စွမ်း၊ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး ဖိစီးမှုဒဏ်ခံနိုင်စွမ်း၊ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်း ဖိစီးမှုဒဏ်ခံနိုင်စွမ်းနှင့် လူ့အဖွဲ့အစည်း ဖိစီးမှုဒဏ်ခံနိုင်စွမ်း ထိုပုံစံများ အားလုံးသည် တန်းတူအရေးကြီးပြီး တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ဖြည့်စွက်ကူညီပေးကြသည်။
ကမ္ဘာလောကအတွင်း သင် နေထိုင်ရပ်တည်ပုံမှာ သင်၏ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး၊ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်း၊ လူ့အဖွဲ့အစည်း ကဏ္ဍတို့တွင် မြင်သာနေသလို ၎င်းကဏ္ဍများအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိပြီး အပြန်အလှန်လည်း မှန်ကန်သောကြောင့် ဤအရင်းအမြစ်နှင့် Hollaback! ၏ လေ့ကျင့်သင်ကြားရေးတို့သည် တစ်ကိုယ်ရည် ဖိစီးမှုဒဏ်ခံနိုင်စွမ်းအပေါ် အဓိကအာရုံစိုက်ပါသည်။ တစ်ကိုယ်ရည် ဖိစီးမှုဒဏ်ခံနိုင်စွမ်းသည် သင့်အနေဖြင့် အပြည့်အ ဝထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းရှိသည့် တစ်ခုတည်းသော ဖိစီးမှုဒဏ်ခံနိုင်စွမ်း ပုံစံလည်း ဖြစ်သည်။
ယခုအချိန်မှာ ကျွန်ုပ်တို့သည် မိမိကိုယ်ကိုယ် ဂရုစိုက်စောင့်ရှောက်မှုအပေါ်သာမက ခက်ခဲကြမ်းတမ်းပြီး စိတ်ဒဏ်ရာပင် ရစေနိုင်သော အခြေအနေများတွင် ရွေးချယ်ခွင့်ကို ရှာဖွေသည့်နည်းလမ်း အပေါ်တွင်ပါ အများဆုံး အလေးပေးအားပြုနေသည့် အချိန်ဖြစ်သည်။ ဤရင်းမြစ်ကို ယနေ့ ဖတ်ရှုခြင်းဖြင့် သင်သည် ဖိစီးမှုဒဏ်ခံနိုင်စွမ်းနှင့် ခွန်အား မြင့်မားပြည့်ဝသည့်
ဘဝတစ်ခု ပိုင်ဆိုင်ရေးအတွက် ပထမဆုံးခြေလှမ်းကို စတင်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ နောက်အဆင့်ကရော ဘာလဲ။
အဆင့် တစ် – မည်သည့်အရာဖြစ်သည်ကို လက်ခံယုံကြည်ပါ။
တိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေရန်အတွက် သင့်အနေဖြင့် ဖြစ်ပျက်နေသည့် အရာများကို အပြည့်အဝ ရှုမြင်ပြီး နားလည်သိရှိရပါမည်။ တစ်ခါတစ်ရံ သင်၏ ထိခိုက်နာကျင်စရာမှာ အမှန်တကယ် မဖြစ်ပွားခဲ့သယောင်၊ အမှန်တကယ်မရှိသယောင် သို့မဟုတ် သင်၏ ထိခိုက်နာကျင်ရမှုထက် သင်က ပိုမိုအားကောင်းသန်စွမ်းနေသယောင် မှတ်ယူဟန်ဆောင်လိုစိတ်ရှိသည်ကို မိမိကိုယ်ကိုယ် သတိပြုမိနိုင်သည်။ အလွန်အားကောင်းသန်စွမ်းသောကြောင့် ထိခိုက်နာကျင်မှုကို ခံစားနေရန်မလိုဟုပင် မှတ်ယူထားနိုင်သည်။ အခြားအချိန်ကာလများတွင်မူ သင့်အနေဖြင့် ဘယ်ဘက်ကြည့်ကြည့် နာကျင်စရာများချည်း ဖြစ်နေသည်ကို တွေ့ရနိုင်သည်။
ပျော်ရွှင်မှုဆိုသည်ပင်လျှင် အမှန်တကယ်ရှိသောအရာ မဟုတ်သလို၊ အထင်မှားမှုတစ်ရပ်၊ အလိမ်အညာတစ်ရပ် ဖြစ်နေသလို ခံစားရပါသည်။ အခြေအနေနှစ်ခုစလုံးကိုလည်း သင် တစ်ပြိုင်နက်တည်း ခံစားရနေနိုင်သည်။
“မည်သည့်အရာဖြစ်သည်” ကို လက်ခံယုံကြည်နိုင်စွမ်း မရှိခြင်းကို သင့်ဦးနှောက်ထဲတွင် မည်သည့်အရာကိုမျှ မခံစားရစေရန် အခြေခံအားဖြင့် ရှင်းလင်းပေးသော အကောင်းဆုံးမဟုတ်သော်လည်း ပင်ကိုယ်သဘာဝ ရှင်သန်ရေး နည်းဗျူဟာတစ်ရပ်ဖြစ်သည့် “ဆက်စပ်တွေးတောမခံယူခြင်း” ဟု စိတ်ပညာရှင်များက ခေါ်ကြသည်။ ၎င်းမှာ နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်-။ အမြဲတမ်း အလုပ်များနေခြင်း၊ အရက်/မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲခြင်း၊ စိတ်ကို လက်ရှိအခြေအနေမှ အဝေးသို့ပို့ထားခြင်း၊ မီဒီယာ အလွန်အကျွံ သုံးစွဲခြင်းတို့ဖြစ်သော်လည်း မည်သည့်အရာက သင့်ကို နာကျင်စေပြီး မည်သည့်အရာက ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စေသနည်း ဆိုသည်ကို ခွဲခြားအမည်တပ်နိုင်စွမ်း ရှိသည်။
Hollaback! သည် မိမိတို့၏ နာကျင်မှု၊ ထိခိုက်မှုနှင့် နှောင့်ယှက်စော်ကားခံရသည့်အတွက် မိမိကိုယ်ကိုယ် အပြစ်တင်မှုတို့အား သိရှိနားလည်စေရန် လူအများကို ကူညီပေးခြင်းဖြင့် ဂျန်ဒါ တရားမျှတရေး လှုပ်ရှားမှုတွင် စွမ်းရည်တစ်ရပ်ကို တည်ဆောက်ထားပါသည်။ ထိခိုက်နာကျင်မှုသည် ကျွန်ုပ်တို့ကို စိတ်ဓာတ်လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်သည်။ သင်ကြားပြသပေးနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကို ပိုမိုသန်စွမ်းလာစေနိုင်ပါသည်။ မည်သည့်အရာက အထောက်အကူဖြစ်စေသည်၊ သင်သိထားသည့်အရာက သင့်ကို သန်စွမ်းစေပြီး မိမိတွင် ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုရှိသည်ဟု သင့်ကို ခံစားရစေသည်တို့အား ခွဲခြားအမည်တပ်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ထိခိုက်နာကျင်မှုများဖြင့်သာ နေထိုင်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ခန္ဓာများက မည်သည်ကို မှီတွယ်ထားကြောင်း စူးစမ်းဖော်ထုတ်ရန် လျစ်လျူရှုထားမည်ဆိုလျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည် လွတ်လပ်ပေါ့ပါးမှုဆီသို့ သွားရာလမ်းကို မည်သည့်အခါမျှ ရှာဖွေတွေ့ရှိမည်မဟုတ်ပါ။ မိမိကိုယ်ကိုယ် နားလည်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့မှာ ဖိစီးမှုဒဏ်ခံနိုင်လာသည်။ စိတ်ဒဏ်ရာမှာလည်း မျိုးရိုးအလိုက် ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ ကျွန်ပြုခံရခြင်း၊ အစုအပြုံလိုက် အသတ်ခံရခြင်း၊ စစ်ဖြစ်ခြင်း၊ လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်ခံရခြင်းနှင့် အခြားသော ဘဝတစ်ခုလုံးကို ပြောင်းလဲစေသည့် အဖြစ်အပျက်များကြောင့်ဖြစ်သော စိတ်ဒဏ်ရာများကို မျိုးရိုးစဉ်ဆက် လက်ဆင့်ကမ်းလာကြသည်။ သိပ္ပံနည်းကျ ဆိုရလျှင် စိတ်ဒဏ်ရာသည် လူတစ်ဦး၏ မျိုးဗီဇတွင် ဓာတုနည်းအရ အမှတ်အသားတစ်ခု ကျန်ခဲ့စေနိုင်ပြီး ၎င်းကို နောက်မျိုးဆက်များသို့
လက်ဆင့်ကမ်းသွားသည်။ ထိုအမှတ်အသားသည် မျိုးဗီဇကို တိုက်ရိုက်ပျက်စီးစေနိုင်ခြင်းမရှိပါ၊ မျိုးဗီဇ သန္ဓေပြောင်းသွားခြင်းလည်း မရှိပါ။ ထိုအစား မျိုးဗီဇ၏ အသွင်အပြင်အား ဖြစ်ပေါ်စေသည့် ယန္တရားကို ပြောင်းလဲသွားစေသည်။ ယခုလက်ရှိတွင် ဖိစီးမှုဒဏ်ခံနိုင်စွမ်းကို တည်ဆောက်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤအခိုက်အတန့်ကို ကျွန်ုပ်တို့မျိုးဗီဇတွင် မှတ်သားသိမ်းဆည်းပုံကို ကျွန်ုပ်တို့၏ သားသမီး၊ မြေးများနှင့် အနာဂတ်မျိုးဆက်များအတွက် ပြောင်းလဲပေးနိုင်ခြေရှိသည်။
သင်ခံစားနေရသည့်အရာကို ကြိုဆိုလက်ခံသည့်နည်းလမ်း –
အကဲဖြတ်သုံးသပ်ခြင်းမရှိဘဲ သင်၏ စိတ်ခံစားချက်များကို နာမည်တပ် ၍ စောင့်ကြည့်ပါ။
ခန္ဓာကိုယ်သည် မှီတွယ်စရာ နေရာများ၊ အာရုံခံစားရစေသည့် နေရာများကို ရှာဖွေရန် သို့မဟုတ် ထိုသို့နေရာများ မရှိခြင်းကို သိရှိရန် စစ်ဆေးကြည့်တတ်သည်။
ကြမ်းပြင်ပေါ်သို့ သင့်ခြေထောက်ကို ခံစားကြည့်ပါ။ ကုလားထိုင်တွင် ပြန်ထားပါ။
အသက်ဝဝရှုခြင်း // တစ်ဆင့်ချင်းအသက်ရှုခြင်း
မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်း/ မိသားစုဝင်တစ်ဦးနှင့် စကားပြောခြင်း
“များလွန်းနေပြီ” အချိန်ကို သိရှိပါ။ ဖယ်ထုတ်ပစ်ရန် အချိန်ကို သိရှိပါ
အဆင့် ၂ – သင်၏အဖြစ်အပျက်ကို ဖန်တီးပါ။
နောက်တစ်ဆင့်မှာ မိမိကြုံတွေ့ခဲ့ရသည့် အဖြစ်အပျက်ကို အဓိပ္ပာယ်ရှိအောင် ဖန်တီးပြုလုပ်သည့် အနုပညာရပ် ဖြစ်သည်။
သင်ကိုယ်တိုင်သည် သင့်ကိုယ်ပိုင်အဖြစ်အပျက်ကို ရေးသားသူဖြစ်သည်။ ထိုအတိုင်းတော့ အမြဲခံစားချင်မှ ခံစားရနိုင်မည်။ ထိခိုက်နာကျင်မှု ခံစားရစေရန် သင် တောင်းဆိုခဲ့ခြင်း မဟုတ်သည်ကတော့ သေချာသည်။ သူတို့က သင့်အပေါ် လုပ်ခဲ့သည့်အရာ သို့မဟုတ် သင့်အပေါ် လျစ်လျူရှုခဲ့သည့် အရာကို သင် တောင်းဆိုခဲ့ခြင်း မဟုတ်ပါ။ ထိုစိတ်ဒဏ်ရာကို ခံစားရစေရန် သင် မတောင်းဆိုခဲ့ပါ။ ရှင်းရှင်းပြောရလျှင် မည်သည့်အရာကမှ သင့်အပြစ်မဟုတ်ပါ။ သို့သော် ဖိစီးမှုဒဏ်ခံနိုင်စွမ်းဆိုင်ရာ သိပ္ပံက ကျွန်ုပ်တို့ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည့် အဖြစ်အပျက်ကို နက်နဲစွဲ ပြောပြသည့်ပုံစံမှာ အလွန်အရေးကြီးကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ကို သတိပေးနေသည်။ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အနာဂတ် အဖြစ်အပျက်ကို ပုံသွင်းနိုင်သည်အထိ အလွန်အရေးပါသည်။
သင် အပြာရောင်ကား ဝယ်စီးရန်အတွက် ထွက်လာစဉ် ရုတ်တရက်ဆိုသလို အပြာရောင်ကားများကိုသာ တွေ့မြင်နေရသည်ဟု စိတ်ကူးကြည်ပါ။ သင်မည်သည့်နေရာသွားသွား အပြာရောင်ကားများချည်းသာ ဖြစ်နေသည်။ လမ်းပေါ်တွင် အပြာရောင်ကားများ အလွန်များပြားနေတာလား။ ဟုတ်ပါသည်။ တမှန်တကယ်ပဲ အပြာရောင်ကားများက *ပိုများ* နေတာလား။ မဟုတ်ပါ။
ယခု “အပြာရောင်ကားများ” ဆိုသည့်နေရာတွင် “စိတ်ဒဏ်ရာရစေနိုင်သော ဖြစ်ရပ်များ” ကို အစားထိုးကြည့်ကြရအောင်။ သင်သည် စိတ်ဒဏ်ရာရစေနိုင်သော အဖြစ်အပျက်များစွာကို တွေ့ကြုံနေရချိန်တွင် အခြားအရာများကို သို့မဟုတ် အရာအားလုံးကိုပင် စိတ်ဒဏ်ရာပေးသည့် အရာများအဖြစ် မြင်မိရန် လွယ်ကူပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ကို အမှောင်ရိပ်ကြီး အုပ်မိုးနေသောအချိန်များတွင် ပျော်ရွှင်မှု၊ ကျေးဇူးတင်ဝမ်းမြောက်မှုနှင့် အလှတရားတို့ကို တွေ့မြင်နိုင်ရန်မှာ ခဲယဉ်းလှသော်လည်း စိတ်ဒဏ်ရာရစေနိုင်သော ဖြစ်ရပ်များ၏ အလယ်တွင် ထိုအရာများကို ရှာဖွေခြင်းသည် ဖိစီးမှုဒဏ်ခံနိုင်စွမ်းတွင် အဓိကကျသည်။
သင်၏ဇာတ်လမ်းကို ရေးသားသူဖြစ်အောင် မည်သို့လုပ်ရမည်နည်း –
“အပြာရောင်ကားများ” ကိုသာ သင် တွေ့မြင်မိသည့်အချိန်ကို စောင့်ကြည့်ပါ။
ပျော်ရွှင်မှုနှင့်အတူ ထိခိုက်နာကျင်မှုကို အလွယ်တကူ ယှဉ်တွဲတွေ့မြင်နိုင်သည့်သဘော ဖြစ်သည့် “နှင့်” ပါသော စာကြောင်းများကို လေ့ကျင့်ရေးသားကြည့်ပါ။
သင်၏ကိုယ်ပိုင် အောင်မြင်ရေးဆောင်ပုဒ်များကို ရေးချပါ။ ထပ်တလဲလဲ ရေးပါ။
တေးဂီတကနေတစ်ဆင့် သင်၏အဖြစ်အပျက်ကို ရှာဖွေပါ။
အနုပညာ (လက်မှုပညာ/အက/အဆို စသည်ဖြင့်)
အဆင့် 3- ရွေးချယ်နိုင်စွမ်းကို ရယူပါ။
နိုးကြားသိမြင်မှုသည် ရွေးချယ်မှုဆီသို့ ဦးတည်နေပြီး ရွေးချယ်မှုမှာ လွတ်လပ်မှု ရှိပါသည်။ မည်သည့်အရာ ဖြစ်သည်ကို လက်ခံယုံကြည်ခြင်းနှင့် သင်၏ အဖြစ်အပျက်ကို ဖန်တီးရေးသားခြင်းဖြင့် သင်သည် နိုးကြားသိမြင်မှု ဖြစ်ပေါ်လာအောင် တည်ဆောက်နေခြင်း ဖြစ်သည်။ ဘဝသည် သင့်ကို ဟန်ချက်ပျက်လဲပြိုအောင် တွန်းတိုက်နေမည်သာဖြစ်ပြီး သင်လုပ်ရမည်မှာ တည်ငြိမ်မှုကို မည်သို့ အလျင်အမြန် ပြန်လည်ရှာဖွေရမည်ကို သင်ယူခြင်း ဖြစ်သည်။ တိုးတက်ကောင်းမွန်မှုမှန်သမျှသည် လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ချက်များမှတစ်ဆင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည်။
လက်တွေ့ဆောင်ရွက်သည့် နည်းလမ်း –
ကောင်းမွန်သော အိပ်စက်သည့် အလေ့အကျင့် ရှိပါ။
မီဒီယာ/လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာ အသုံးပြုသည့်အချိန်ကို ကန့်သတ်ပါ။
ဟင့်အင်းဟု ပြောတတ်အောင် သင်ယူပါ။
လက်သင့်ခံပြီး သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကို ဂရုစိုက်ပါ။
ခန္ဓာကိုယ် လှုပ်ရှားတက်ကြွစေသော လေ့ကျင့်ခန်းများ လုပ်ပါ။ (ပြေးခြင်း၊ ကခုန်ခြင်း)
ခန္ဓာကိုယ် တည်ငြိမ်အေးဆေးစေသော လေ့ကျင့်ခန်းများ လုပ်ပါ။ (တရားထိုင်ခြင်း၊ ယောဂ)
ကျေးဇူးတင်စိတ်ကို ဖွင့်ဟဖော်ထုတ်ပြပါ။ / ကျေးဇူးတင်ကြောင်း မှတ်တမ်းပြုရေးသားပါ။
HOLLABACK! ၏ ဖိစီးမှုခံနိုင်စွမ်းဆိုင်ရာ ရင်းမြစ်များကို အသုံးပြု၍ အခြားသူများကို ကျွန်ုပ် မည်သို့လေ့ကျင့်ပေးနိုင်သနည်း။
ကျွန်ုပ်တို့၏ လက်တွေ့သက်သေပြပြီးသော လေ့ကျင့်သင်ကြားမှုကို ဒေသအလိုက် ဓလေ့ထုံးစံများ၊ နောက်ခံအခြေအနေများ၊ ပင်ကိုယ်ဝိသေသများနှင့် လိုက်လျောညီထွေရှိစေအောင် ပြုပြင်ဖန်တီးရန် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် လက်တွဲဆောင်ရွက်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူ အလုပ်လုပ်ရန် နည်းလမ်းနှစ်ခု ရှိပါသည်။ ပထမနည်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့ကို အတိုင်ပင်ခံများအဖြစ် ငွေပေးချေခြင်းဖြင့်ဖြစ်စေ သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့ ပူးပေါင်းလျှောက်ထားသည့် ထောက်ပံ့ကြေးတစ်ရပ်မှတစ်ဆင့် ဖြစ်စေ ကျွန်ုပ်တို့က လေ့ကျင့်သင်ကြားမှု ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ဒုတိယနည်းအနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့ကျင့်သင်ကြားရေး နည်းစနစ်ကို ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှ အဖွဲ့အစည်းများအတွက်လည်း လိုင်စင်ထုတ်ပေးသည်။ အဖွဲ့အစည်းများမှာ လေ့ကျင့်သင်ကြားသူများအတွက် သုံးရက်တာ သင်တန်းကို တက်ရောက်ရန်လိုပြီး အရည်အသွေး စိစစ်ရန် ဒေသအလိုက် သင်တန်းမပေးမီ MOU လက်မှတ်ရေးထိုးရပါမည်။ သင်စိတ်ဝင်စားပါက [email protected] သို့ အီးမေးလ်ပို့ပေးပါ။
ယခု မည်သည်ကိုလုပ်ဆောင်ရမည်နည်း။ နောက်အဆင့်များ –
ဤသည်တို့မှာ နောက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ပံ့ပိုးသော ထပ်ဆောင်းလေ့ကျင့်သင်ကြားမှုအချို့ ဖြစ်သည်။
လုပ်ငန်းခွင်တွင်ဘေးလူများမှ ကြားဝင်မှု၊ ကျွန်ုပ်တို့နှင့် အတူတွဲအလုပ်လုပ်သော အဖွဲ့အစည်း/လုပ်ငန်းတစ်ခုချင်းစီနှင့် သင့်လျော်အောင် အပြည့်အဝ ပြုပြင်ပြောင်းလဲထားသည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိပါးစော်ကားမှု ကာကွယ်ရန် လေ့ကျင့်သင်ကြားရေး ပြည်နယ်နှင့် ဒေသဆိုင်ရာ ဥပဒေများနှင့် အပြည့်အဝ ကိုက်ညီပြီး ဘေးလူများမှ ကြားဝင်မှုဆိုင်ရာ နည်းစနစ်များ ပါဝင်သည်။
2020 ခုနှစ်ကို ရင်ဆိုင်ရာတွင် ဖိစီးမှုဒဏ်ခံနိုင်စွမ်း
ရဲတပ်ဖွဲ့၏ ခွန်အား အလွန်အကျွံသုံးစွဲမှုနှင့် လူမည်းဆန့်ကျင်ရေး ထိပါးစော်ကားမှုများကို တားဆီးရန် လေ့ကျင့်သင်ကြားမှု
လုပ်ငန်းခွင်တွင် ပဋိပက္ခ လျော့ပါးပပျောက်ရေး လေ့ကျင့်သင်ကြားရေးမှု
COVID-19 ကာလအတွင်း ပဋိပက္ခ လျော့ပါးပပျောက်ရေး
နောက်ဆုံးအနေဖြင့် အဆိုပါ လေ့ကျင့်သင်ကြားရေးများကို ကျွန်ုပ်တို့ တိုးချဲ့နိုင်စေရန်အတွက် လှူဒါန်းရန် စဉ်းစားပေးပါ။ နောက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက် ဤနေရာ ကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပေးပါ။ ဤလေ့ကျင့်သင်ကြားမှုကို မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်း 10 ဦးနှင့်အတူ မျှဝေပေးပြီး လူတိုင်းအတွက် ပိုမိုဘေးကင်းလုံခြုံပြီး သနားစာနာစိတ်မြင့်မားသော ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ရပ်ကို ကျွန်ုပ်တို့ ဖန်တီးရာတွင် ကူညီပေးရန် တိုက်တွန်းပါသည်။
ထိပါးစော်ကားခြင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် သိမြင်နိုးကြားမှုကို မြှင့်တင်ရန် ဖြစ်ရပ်ဇာတ်လမ်းများကို ကျွန်ုပ်တို့ စုဆောင်းနေပါသည်။သင်၏ထုတ်ဖော်ပြောဆိုချက်ကို မျှဝေပေးခြင်းဖြင့် ဤပြဿနာရပ်အပေါ် လူအများ နားလည်ထားသည့် ပုံစံကို သင်က ပြောင်းလဲပေးနိုင်ပါသည်။ သင်တစ်ဦးတည်း ဖြစ်မနေဘဲ သင့်ကို ကျွန်ုပ်တို့ အားပေးကူညီနေသည်ကို သတိရပါ။